Umkhankaso wokugcina: Ngabei-IFP izokwazi ukupha uMntwana isipho? | Bayede News
Home/ Ipolitiki/Umkhankaso wokugcina: Ngabei-IFP izokwazi ukupha uMntwana isipho?
Umkhankaso wokugcina: Ngabei-IFP izokwazi ukupha uMntwana isipho?
IPOLITIKI yaseNingizimu Afrika inephisi ekade lalizingela. Lowo oliphisi nguMntwana wakwaPhindangene ohlonishwa nhlangothi zonke njengosopolitiki nomholi omalundalunda. Oshicilelweni lwamhla ziyisi-6 kuZibandlela ngowe-1985 iphephabhuku iFinancial Mail lashicilela umbhalo kaSolwazi uLawrence Schlemmer ngaphansi kwesihloko esithi; “Towards Orchestrated Liberation.’ Lo Solwazi nowayenguMqondisi weCentre for Applied Social Sciences, waphawula wathi ngoShenge nobuholi bakhe ngezikhathi ezabe zinzima: “Bayingcosana osopolitiki abanamandla eNkosi uButhelezi abangakwazi ukusebenza ipolitiki yezomdabu endaweni enkulu eyisifunda esihlanganisa amalokishi aseThekwini nawasePinetown, awaseWitwatersrand nakwezinye izindawo, izigcawu zosozimboni abamhlophe, kanye nezindaba zamazwe ngamazwe. Ilungu lomndeni waseBukhosini bukaZulu neNkosi Yesizwe sakwaButhelezi, uxoxile noPope, noMengameli uReagan nezinhloko zemibuso yaseNtshonalanga, yase- Afrika nakwezinye izindawo ngezinkinga zangomuso eNingizimu Afrika. Imvelaphi yeNkosi uButhelezi imhlomisa kahle ngamaqhaza ehlukile. Usomaqhuzu kweZomlando neZokulawula i-Afrika wase- University of Fort Hare nowake waba yilungu le-ANC Youth League nosigaxamabhande osemncane kaMengameli we- ANC iNkosi u-Albert Luthuli.”
USolwazi uSchlemmer uyaqhubeka embhalweni wakhe athi: “Ukunqaba kweNkosi uButhelezi ipolitiki yokuthuthuka ngokwehlukana enye yezinselelo abanazo ebuholini bakhe. Eminyakeni yokuqala emveni kokuqokelwa ebuholini be-Inkatha neKwaZulu wabhekana wanqoba amaqembu okwakubukeka ehambisana noHulumeni njengeZulu National Party no-Umkhonto kaShaka. Ukubekwa kwakhe esikhundleni sokuhola isizwe sakwaButhelezi akuzange kuqinisekiswe nguHulumeni waseNingizimu Afrika iminyaka eminingi ngenxa yokuphikisana nokuthuthuka ngokwehlukana kanye ne ‘politiki yezabelo’,” kuphetha uSolwazi.
UShenge ongagcini nje ngokuba yiNkosi yesizwe sakwaButhelezi ungumholi weqembu lesine ngobukhulu kwaphikisayo kuleli Inkatha Freedom Party (IFP). Kule mpelasonto iqembu lakhe lizokwethula umqulu wezethembiso njengoba elakuleli liya okhethweni esikhathini esiyizinyanga ezimbili. Kukhona okwehlukile kulokhu nokumqoka ngokwethulwa kwalo mqulu wezethembiso. Okokuqala nje yindawo oyokwethulelwa kuyo, okuyiChatsworth.
Ekhuluma naleli phephandaba umkhulumeli we-IFP, uMnu uMkhuleko Hlengwa uthe balindele amakhulu ngamakhulu abalandeli bale nhlangano abaqhamuka kuzo zonke izifundazwe. Uthe njengoba le nkudla eseChatsworth imumatha abantu abayizinkulungwane ezingama-22 balindele ukuba igcwale phama.
Ngokomlando le nkundla enkulu eseChatsworth kwakungeyamaNdiya ngokuhlukaniswa uHulumeni wobandlululo olwabunjwa ngeminyaka ye-1950 ukuhlalisa ikakhulukazi amaNdiya futhi iChatsworth ibe yindawomgcele ehlukanisa izindawo zabamhlophe ezisenyakatho namalokishi aboHlanga aseNingizimu neTheku. Yize bungekho ubufakazi bokuthi inhloso bekuyileyo, kepha kukhona isithombe esihle esakhekayo ngokuqokwa kwale ndawo njengendawo le nhlangano ebingathula kuyo umqulu wezethembiso. Omunye ubezothi ayiyi ngani kobantu lapho yaziwa ngokuthi abalandeli bayo baningi khona? Kepha ungacishe uqonde uma ulandela izitatimende nokwenza kwaleli qembu eminyakeni eli-15 eyedlule. Kusobala ukuthi ngezenzo liyazikhulula emakhamandeleni okubekwa njengeqembu lamaZulu kepha liziveza njengekhaya lawo wonke umuntu waseNingizimu Afrika. Lokhu kubonakala nangendlela elimeleleke ngayo eSishayamthetho njengoba kukhona nezinye izizwe nezinhlanga ezingewona amaZulu. Ukubeka lo mcimbi eChatsworth nokubonakala kwamabhasi agcwele aboHlanga betheleka kule ndawo kungahle kuthumele umyalezo emphakathini wamaNdiya ekutheni i-IFP iyawucabanga nokuthi ingaba yikhaya lawo futhi.
Esikhathini esingangonyaka uMntwana usekuphinde cishe kabili ukuthi njengokunquma kobuholi usezozibeka phansi izihlangu ngenhloso yokuhlelembela iqembu ukuba liqoke umholi kulandelwa imigudu yangaphakathi. Lesi sinqumo samukelwa kahle ngaphakathi nangaphandle kweqembu nokho sashiya ingcindezi kumalungu nakubaholi be-IFP.
Embusazweni nasezweni lapho abaholi bamaqembu besolwa siqu ngezenzo zenkohlakalo, umholi we-IFP akakaze anukeke, okwenza ingcindezi yokuqoka ozofana naye nozoqinisekisa ukuthi iqembu alingeni odakeni. Uma kusaqalwa kungalula ukuqoka oyedwa ongenachashaza njengoba kuqokwe uMnu uVelekhaya Hlabisa kepha njengoba umlando wakhe noweqembu ungufakazi umholi oyothatha kuyomele abe namandla okwenza nabanye abaholi namalungu benze okufanayo kokuziqhelelanisa nenkohlakalo. Enanela isinqumo sokuphakanyiswa kukaHlabisa njengalowo ongahola iqembu engxoxweni aba nayo neBAYEDE ngonyaka wezi-2017 uShenge wathi : “Izwe libolile phuhlu, uHlabisa akanalo nelincane ichashaza nephunga lenkohlakalo. Njengoba kade aba yiMeya usehloliwe. Uma ngingakhuluma imfihlo nje, ukunqoba kwethu iNquthu kube amangwevu akhe,” kusho uShenge otuse uHlabisa ngokuba usomaqhingasu.
Uthe okwenza uHlabisa amalungu esigungu esiphezulu se-IFP akunanele ukuphakanyiswa kwegama lakhe wukuthi uyisikhuphekhuphe seqembu, ukhulele eqenjini, embuthweni wentsha, waphatha nezikhundla ezihlukene,” kusho uMntwana. Nakanjani amehlo azobe ethe njo kubaholi abayophatha ngale koMntwana bebhekwe ukuthi kabangcolisi yini umlando wokungabalwa enkohlakalweni.
Khona futhi engxoxweni noMntwana, yena siqu waveza ukukhathazeka kwakhe ngemikhuba athi isiyaqapheleka nakuyo i-IFP. Lena bekuyimikhuba ekhonjwa kwamanye amaqembu nokuyilapho umhawu wezikhundla ungcolisa amaqembu kwabanye kuze kufe nabantu. Kulokhu iningi liyamtusa uMntwana ekutheni ukuba kwakhe yinomfi ehlanganise iqembu kwenza, yize le mikhuba ikhonjwa, ikwazi ukuphebezeka. Okwamanje kuyiwa ekwethulweni komqulu wokhetho akukezwakali lutho olwethusayo.
Yize kube lukhuni ukuthola umongo walo mqulu ozobe wethulwa ngeSonto uHlengwa ukuqinisekisile ukuthi lapha kabafudumezi kepha bazophaka amaphuzu amqoka ngoba bazinike isikhathi ekuqondeni isimompilo nomnotho wakuleli. “Umqulu wezethembiso wethu ungobambekayo futhi akusiwo nje umbono obuka eduze njengoba kwenza amanye amaqembu. Esingakwethembisa ukuthi umqulu wezethembiso wethu ubuyisela izwe ezimpandeni zalo,” kusho uHlengwa.
Akuyona imfihlo ukuthi i-IFP ayisamile njengoba yabe imile eminyakeni eyedlule futhi ziningi izizathu zalokho. Ngonyaka we-1994 emavotini aKwaZulu- Natal yacosha angama-56%, yedlula awe-ANC ngama-20%. Ngowezi-2004 zajika izinto zavuna i-ANC eyaba ngaphezulu ngama-10% kwawe-IFP, nokho i-IFP yakwazi ukugcina isizinda sayo esisenyakatho nesifundazwe.
Kubo bonke omasipala, ngaphandle kowodwa, baKwaZulu-Natal, ukwesekwa kwe-IFP kwehla kwathi okwe- ANC kwadlonga. Yize i-IFP iwugcinile uNongoma no- Ulundi, ukwesekwa kwayo kwehle kusuka ngaphezudlwana kwama-90% kwaya ngaphezudlwna kwama-80%. Yehle kakhulu eNkandla kusuka kwangama-89.08% ngowezi-2004 kwehlela kwangama-48.14% ngowezi-2009, lokhu kwehla kungaphezu kwama-40%.
Kwezinye izindawo i-IFP ibilokhu ishaya amaphiko kodwa nokho sekwehlile ukwesekwa kwayo, njengaseMsinga ukwehla kwasuka kwangama-82.4% kwaya kwangama-60.5% kwathi eJozini kwasuka kwangama-74.36% kwaya kwangama-52.29%.
Ukwesekwa okwakukhona ngowezi-2004 kwabonakala kwehla kakhulu: eMlalazi (Eshowe) kwasuka kwangama-73.61% kwaya kwangama-41.02% (ngenkathi i-ANC ikhuphuka isuka kwangama-20.55% iyofinyelela kwangama-55%); kwaMaphumulo i-IFP yalahlekelwa ngaphezu kwangama-50% okwesekwa isuka kwangama-69.41% iya kwangama-34.11%.
Ezindaweni lapho i-IFP yayincintisana ngokubonakalayo khona yavela yehlelwa ukwesekwa okumangalisayo. Yehla isuka kwangama-40.93% e-Ingwe yathola kuphela angama-20.01%, eMhlathuze (Empangeni) yasuka kwangama-40% yaya kwangama-23%, kwathi eMzumbe yehla kwangama-37% yaqathakela kwangama-20%.
Lapho eyayivele iyingcosana khona ngowezi-2004 yavela yaphela ngowezi-2009. Ngaphansi ko-Ubuhlebezwe, kukhona Ixobho lapho i-ANC yenyusa ukwesekwa kwayo okukhulu okunama-59% kwafinyelela kwangama-83%, ngesikhathi i-IFP iba ngaphansi kwangama-13% isuka kwangama-34%. E-Impendle yasuka kwangama-27.66% yabhuquza kwangaphezudlwana kwangama-8%.
I-IFP ibe namavoti angama-50% nangaphezulu komasipala abangama-27 ngaphambi kokhetho lwangowezi-2009, kodwa emva kwalokho yakwazi ukugcina lesi sibalo kwayishiyagalolunye kuphela. Khona kunjalo yakwazi ukuthola amavoti angaphansana kwangama-30% ezifundeni zomasipala ezili-14 ngowezi-2004, kodwa ngowezi 2009 yehla yabangaphansi kwangama-30% kubona labo masipala.
Okwenza izinto zibe nzima, ngaphambi kokhetho loHulumeni Basekhaya lwangowezi-2011, owayenguSihlalo we-IFP uZanele KaMagwaza Msibi waphuma eqenjini wasungula elakhe iNational Freedom Party. I-NFP yathola ngaphezudlwna kwama-2.5% wamavoti kuzwelonke, angama-11% KwaZulu-Natal, nezihlalo eziningi kwaNongoma, yaqala yabusa ngokubambisana ne-ANC kuMasipala Wesifunda iZululand District Municipality, yahlwitha iDumbe ku-IFP.
Kwaba yinkambabeyibuza ukwehluthwa kwayo isikhundla sokuba yiqembu elikhulu kwaphikisayo KwaZulu-Natal nokuyisikhundla esawela kuDemocratic Alliance (DA).
Muva nje kukhona ukuzethemba kumalungu nabaholi ekutheni leli qembu lingahle libuyise izinduku. Uma kuthathwa ngokwezinombolo ezivela okhethweni lokuchitshiyelwa isithombe sithi leli qembu liyabuyela emgqigqweni walo. Ephawula ngalokhu omunye wabakhulumeli beqembu uMnu uJoshua Mazibuko wacashunwa ethi: “Silokhu sibona ukuthi siyasimama siyenyuka kusukela ekugqashuleni igoda kweNFP ngowezi-2011. Sesimbuyisile uNongoma ekubambisaneni kweNational Freedom Party ne- ANC, sayigcina iNkandla sabuye sahlwitha Umfolozi neJozini, okwakusilahlekele kwathatha ukubambisana kweNFP ne- ANC.”
Umbuzo ompendulo yawo iyovela emuva kokhetho ngothi ngabe amalungu ale nhlangano kanye nabavoti bazokwazi yini ukupha uMntwana wakwaPhindangene isipho ngokuthi iqembu lenze kangcono okhethweni lukazwelonke nokuyinto ebukeka ingehla kahle kuye (uMntwana) iphinde inike nozothatha izihlangu zakhe umfutho wesiqalo esisha kanjalo nekhasi elisha lohambo ngaphandle koMntwana.
Kuphambana izifiso zomndeni nomthetho kwaMbotho